FAQ on nesembozo for BlackBerry — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izihloko mayelana BlackBerry → Izesekeli BlackBerry: izibuyekezo, FAQ, Izincomo →
FAQ on nesembozo for BlackBerry
Ungakwazi Ukukhetha enkulu izimo zonke Smartphones BlackBerry thola. Vertical and nesembozo ovundlile-evulekile, ihlanganisa ne nesigaba amakhadi ibhizinisi noma imali, izembozo, emaphaketheni, amacala, izikhwama, izembozo epulasitiki, amacala amandla anda, abicah ezinoqwembe, amacala, amabhethri kanye ihlanganisa BlackBerry nezinye izinhlobo. imibala ehlukene, layout olunothile, design, — materials kungcono konke ezintweni okhetha ngabanye.
Kulesi sihloko, thina hlela ulwazi izimo BlackBerry.
Abakhi ihlanganisa for BlackBerry
Ngokuvamile ihlanganisa BlackBerry kungenziwa ahlukaniswe ngumkhiqizi kanje:
— Original ihlanganisa HDW, ASY, ACC, okukhiqizwa ngaphansi kokulawula kwe-Research in Motion (Canada, USA) ikakhulukazi onobuhle ezahlukene BlackBerry. izinga lihle, ekahle BlackBerry Smartphones.
— babelibiza ihlanganisa ezivezwa brand owaziwa njenge Seidio, Incipio, Speck, Smartphone Experts, OtterBox, nabanye. It is ngokukhethekile yenzelwe umfuziselo othize BlackBerry ihlanganisa design esiyingqayizivele nangezinhloso ezahlukahlukene. Kwangathi izici ezengeziwe, ezifana umthelela ukumelana naso futhi kwenze ukumelana namanzi, design ultra-mncane. Esinegama ihlanganisa BlackBerry — eliphezulu impahla kanye 100% -Compatible.
Amacala amacala — unbranded okwamanje abakhiqizi engaziwa. It sibonisa inani elikhulu ngamacebo kanye nemibala. Sikhetha ngawe nesembozo ezithakazelisa kakhulu futhi eliphezulu.
ikhava format BlackBerry
Ifomethi (ifomu factor, uhlobo) ukuze amboze BlackBerry ingase ibe khona ehlukile. Ichaza izici main of the cover: indlela futhi lapho zizosetshenziswa, futhi imaphi amathuba ukunikeza umnikazi walo. Okokuqala, bheka nhlobo ngalezi zakhiwo ihlanganisa zibukeke ezithombeni:
Kodwa izincazelo osayizi ezivame kakhulu nesembozo for BlackBerry:
Case-ephaketheni (Pocket Case, esikhwameni Case) — format intandokazi kunazo zonke iwukuthi "ayesisebenzisa" smartphone, futhi kulula ukubeka BlackBerry yakho bese uyalikhipha, kanye ephaketheni ibhulukwe lakho noma jeans.
Esikhwameni ngebhande clip (Clip holster, swivel holster) ikuvumela ukuba ushiye ezingenalutho-emakhukhwini, kubaluleke ngokukhethekile kulabo bayathanda ukugqoka amabhulukwe isudi. Zikhona amacala, nangenhliziyo isiqeshana esikhiphekayo. Qaphela ukuthi lengiyo Faka BlackBerry kuleli cala ngaphakathi esibukweni, kunokuba ngaphandle, njengoba abaningi becabanga ngokungeyikho.
Case-holster (holster Case) injongo yayo sifana icala ngebhande clip, kodwa umehluko oyisisekelo phakathi smartphone — angahambisani, futhi ifakwe okunamathiselwe ekhethekile. Lokhu lula devaysa isizinda, futhi ushiya ukuvula ebusweni ezingemuva okuvamise, BlackBerry logo ibekwe kahle.
Mboza nge nokubopha — icala elifanayo isiqeshana, njengoba nje clip obandayo alisetshenziswa, nezinye element abanye, ezifana gum noma uxhumano mechanical.
wallet esikhwameni (esikhwameni Case) ngaphezu ekuvikeleni BlackBerry yakho ikuvumela ukuba ugcine imali nama-credit card.
Sikhwama yebhande (Tote Case) — option ukuthwala smartphone esandleni sakho, like nesembozo for the ikhamera, noma okhiye. Inketho best for labo musa ahlukane idivayisi yakho aphathwayo isicishe never. Futhi-ke, kumane nje stylish.
Esikhwameni Bag (Ikhasi Case) for BlackBerry ezanele abembethe ifoni isikhwama noma. isikhwama. Ngaphandle, lokhu ihlanganisa a format kakhulu amehlo kusuka.
Cover mpo enezingqimba Ukuvulwa (Flip Case), kanye cover-ifolda (Journal Case), kuba ikhambi kulabo abadinga ukufinyelela okusheshayo esikrinini, futhi ngesikhathi esifanayo, amadivaysi onokwethenjelwa ukuvikelwa. nesembozo okunjalo BlackBerry futhi ngokuvamile ube linezingxenye for imali noma credit cards.
Silicone Case (Silicone Case) — amadivaysi «nezimo» ukuvikelwa, it akudingekile ukuba kuze kususwe isikhathi ngasinye ngaphambi kokusebenzisa smartphone, futhi ngendlela efanayo, yonga isikhathi. Silicone Amacala unayo yonke ukuvuleka ezidingekayo sokuthola terminals, njengembobo yokuxhuma USB kanye headset.
Okuhlezi emqondweni abicah icala noma TPU Case (njengoba Soft Shell Case), kuyinto version aminyene ngaphezulu isembozo abicah futhi ngokuvamile inikeza isivikelo esikhudlwana.
isikhwama Plastic (Plastic Case) futhi ihlala kudivayisi, futhi inikeza ukufinyelela bonke izixhumi futhi izinkinobho ukulawula BlackBerry smartphone.
Case-Cover (Hard Shell Case) — icala lokuthi uvikela kuphela emuva zedivayisi zawo evele. Njengoba leli gama lisikisela, it is igqoke njengoba lid, it ikuvumela ukuba isuse kuso ngokushesha uma kwenzeka isidingo Nokho, kuyaqabukela kudingekile. I impahla nesembozo, zamabhodlela kuvamise epulasitiki, kodwa kungase futhi kwenziwe okusansimbi Ngokwesibonelo, isikhumba ifaka.
Ikesi Stand (Stand Case), noma Case ne ukuma function, ewusizo ukubukela amabhayisikobho noma slideshow sezithombe. Smartphone Kulezo zimo kungenziwa ngokushesha abeke etafuleni namavidiyo wokubuka hands-free.
Cover-battery (Battery Case), njengoba igama libonisa, it has a icala elithile futhi ikuvumela ukuba basebenze ngedivayisi yakho isikhathi eside. Yiqiniso, liphinde livikela BlackBerry yakho.
Case-bumper (lebhampa) ivikela kuphela ebusweni ohlangothini smartphone. Njengoba sazi ukuthi ngokuvamile iwela smartphone side surface, kuba ngempela kufanelekile ukuvikelwa. Futhi njengoba plus — kokungenela sakugcina ekuklanyweni BlackBerry yakho.
ikhava Complex inezingxenye uphiko eziningana, okuyinto ngokuvamile angasetshenziswa ngokuzimela. Ngokwesibonelo, cover ezenziwe abicah, okuyinto sifakwe umnikazi yepulasitiki nentfo isiqeshana detachable.
Case ruggedized (wasemuva Case) yenzelwe ukuvikela okukhulu zedivayisi. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba abakhi, travel izivakashi abathanda, Anglers kanye nezinye abasebenzisi eziningi — wonke umuntu angakwazi ukuhlola ingozi lokulimala kudivayisi uqobo. nesembozo okunjalo kungavikela nje kuphela umonakalo mechanical, kodwa futhi, isibonelo, kusukela umswakama.
Case-to-case (Housing Case), eqinisweni, kuba isidumbu BlackBerry wakho wesibili, esehlanganise it bevela kuzo zonke izinhlangothi.
isikhwama esikhwameni (Bag Case) ikuvumela ukubeka smartphone yakho ngaphakathi esikhwameni, ngoba Ubukhulu bayo idlule izilinganiso smartphone, futhi le khava ngokuvamile impahla indwangu. Ezimweni ezinjalo kukhona jikelele, okungukuthi kuhambisana kwabaningi onobuhle BlackBerry, hhayi yakhelwe ethile.
Magnetic ubuchwepheshe BlackBerry
An isici esibalulekile ikhava BlackBerry yikhono ukusebenza magnetic BlackBerry ubuchwepheshe esikuvumela wazi kuba smartphone ayibandakanyi (ngaphakathi kwalezi nesembozo has a inzwa magnetic ukuthi kubangelwa ngokushesha nje ifoni wahleka ngoba wayeseminyaka engu) noma. Emcimbini "Kukhonani kulesi sikhwama sakho" futhi "yokukhipha" uhlelo lokusebenza software third-party "ninamathele" izenzakalo ezihlukahlukene, it ikuvumela ukuba uthole okuningi izinzuzo ezahlukene kanye nezici esindisa impilo yebhethri up ukukhulisa usability ukukhiywa kocingo bese ushintshela izilungiselelo isaziso.
Ngokwesibonelo, ibhethri amandla imali uma BlackBerry in the holster eze off the backlight screen futhi ikhiphedi Ilokhi. Futhi ukuze kube lula uqaphile umsebenzisi ungakhetha izinto ezahlukene ongazikhetha ifoni ukuba ikhale (vibration, ringtone, vibration + Ihubo, LED-inkomba), ngenkathi kwenzeka ucingo ngeke ngokuzenzakalelayo ukusebenzisa isimiso esifanayo umsindo, futhi ngaphandle kwalo — enye. Futhi, Yebo elula kakhulu ukuba ajwayele ukuba lapho obeka smartphone uma kwenzeka ngokuzenzekela ivinjelwe iphasiwedi yakho.
Thenga Case for BlackBerry
Uhla ihlanganisa for BlackBerry lwemibhalo yethu kunazo oluphelele, futhi angakwazi ukwanelisa ngazo Ukuthanda elicwengiweyo kunazo — ukhethe lokho okuthandayo! Uzobona izithombe ezinemininingwane yezitho nesembozo for BlackBerry, futhi ufunde izincazelo zabo. Lokhu original ihlanganisa RIM BlackBerry (amakhodi HDW-, ASY-, ACC-), futhi ihlanganisa ezingaphezu kuka-20 brand brand esungulwe (Seidio, Incipio, Case-Mate, PureGear, Smartphone Experts, OtterBox, Monaco, Targus, Cellet, Wireless Xcessories ( Wirex), T-Mobile, Nite Ize, Golla, Krusell, umzimba Glove, Speck, Nillkin nabanye), kanye amacala nezinye abakhiqizi.
Khetha ikhava kungenziwa ezikhethiwe ekhasini izesekeli model yakho BlackBerry noma hlobo (format) ikhava . Ungahlala uthintane ne ochwepheshe bethu ngaphambi kokuthenga, kanye ngokuzimela, futhi "bukhoma" ukuba bajwayelane izimpahla.